चितवनमा एमालेको अग्रता, गठबन्धन पर्यो पछि ! « Bagmati Page
चितवनमा एमालेको अग्रता, गठबन्धन पर्यो पछि !
चितवनमा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । राप्ती नगरपालिकामा र इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार अगाडि छन्।
राप्ती नगरपालिमा ३०० मत गणना हुँदा एमालेका गोविन्दप्रसाद कँडेल १५२, गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका शमशेर लामाले १०३ मत पाएका छन्। इच्छाकामनामा २०० मत गणना हुँदा एमालेका दानबहादुर गुरुङले ९४ र काँग्रेसकी गीता गुरुङले ८० मत पाएकी छन्।
माडीमा ३५० गणना हुँदा माओवादी केन्द्रका ऋषि काफ्लेले १४३ र एमालेकी ताराकाजी कुमारी महतोले १२७ मत पाएकी छन्। खैरहनी नगरपालिकामा काँग्रेसका मेयर उम्मेदवार अगाडि छन्। १८७ मत गणना हुँदा काँग्रेस उम्मेदवार शशि खनियाले ९३ मत पाएका छन् भने एमालेका लालमणि चौधरी ५९ मत पाएका छन्।
यी सबै पालिकामा मतगणना जारी छ।कालिका र रत्न नगर नगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ। भरतपुर महानगरको केही बेरपछि मात्र मत गणना सुरु हुनेछ। चितवनमा भरतपुर महानगरबाहेकका पालिकामा अहिले मतगणना जारी छ। भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना सुरु हुने तयारी रहेको छ ।